Izihlandlo zokugqibela zibonakaliswa kuYesu Kamsinya ku Buyela
Ngaba Siphila Ngexesha Lokuphela?
Izimpawu zeBhayibhile zexesha lokugqibela libhekiselele kuYesu Kamsinya kubuyela
Ukwanda kwembambano kwiplanethi yomhlaba kubonakala kubonisa ukuba uYesu Kristu uza kuza ngokukhawuleza. Ngaba sihlala kumaxesha okuphela?
Isiprofeto seBhayibhile sisichukumisayo ngoku ngoku kubonakala ngathi iziganeko ezikhoyo zizalisekisa izibikezelo ezenziwe ngamawaka eminyaka edlulileyo. Ngokubanzi, i-End Times, okanye i- eschatology , yinkalo enzima kakhulu, kunye neengcamango ezininzi njengoko kukho amahlelo angamaKristu .
Abanye abaphengululi bayabuza ukuba iziganeko ezingakumbi zeziprofeto zenzeka kwihlabathi namhlanje okanye ukuba ingxelo yabo iqhume ngokukhawuleza ngenxa yeendaba zeekhefu ezingama-24 kunye ne-intanethi.
AmaKristu avuma into enye, nangona kunjalo. Imbali yomhlaba iya kugqiba ekubukeni kukaYesu Kristu. Ukubona oko iTestamente Entsha ithi malunga nesihloko, kuyaqondakala ukuba uhlaziywe ngamazwi kaYesu ngokwakhe.
UYesu Wanikela Ngezihlandlo Zokugqibela Izilumkiso
Iindinyana ezintathu zeVangeli zinika iimpawu malunga noko kuza kwenzeka njengoko i-End Times ihamba. KuMateyu 24 uYesu uthi ezi zinto ziya kwenzeka ngaphambi kokubuya kwakhe:
Abaprofeti bamanga, abaprofeti bobuxoki baya kubonakala
Izimfa kunye namahemuhemu emfazwe
Iintlanga nezikumkani ziya kulwa
Ukuzamazama komhlaba kunye nendlala
Ukutshutshiswa , ukuthengwa
Ukushumayela ivangeli kwihlabathi lonke
Ukunyamala kwelanga nenyanga, iinkwenkwezi ziyawa, imizimba yasezulwini ishukunyiswe.
UMarko 13 noLuka 21 baphinda inkulumo efanayo, phantse. ULuka 21:11 unikeza isilumkiso esicacileyo:
"Kuya kubakho iinyikima ezinkulu, indlala, neendyikitya zokufa kwiindawo ezahlukahlukeneyo, kunye neziganeko eziyikrakra kunye nemiqondiso emikhulu evela ezulwini." ( NIV )
KuMarko noMathewu, uKristu ukhankanya "ngento enyanyekayo ebangela ukuba kube yincithakalo." Eyokuqala kuDaniyeli 9:27, eli gama laprofeta amahedeni a-Antiochus Epiphanes akha i-altare kuZeus endlwini yeYerusalem ngo-168 BC. Iingcali zikholelwa ukuba ukusetyenziswa kukaYesu kubhekisela ekutshatyalaliswa kwethempeli likaHerode ngo-70 AD kunye nolunye uhlaselo oluza kuza, olubandakanya Umchasi - Kristu .
Abafundi beeNkcazo zexesha lokugqibela bavakalisa ezi meko njengoko kuzaliseka kweemeko zokuvela kukaYesu: iintsuku zeenkcubeko eziphosakeleyo zokuphela kwehlabathi, iimfazwe eziqhubekayo emhlabeni, iinyikima, iindwangu, izikhukhula, indlala, i-AIDS, i-Ebola, intshutshiso yamaKristu ISIS, ukuziphatha kakubi ngokwesini , ukukhunjulwa kwamatye, ugqirha, kunye nephulo lokushumayela emhlabeni jikelele.
Izilumkiso ezingakumbi kwiSityhilelo
ISityhilelo , incwadi yokugqibela yeBhayibhile, inikeza izilumkiso ezininzi eziza kuqala ngaphambi kokubuya kukaYesu. Nangona kunjalo, iimpawu zingaphantsi kweentlobo ezine ezahlukeneyo zokutolika. Ingcaciso eqhelekileyo yeZiqwenga ezisixhenxe ezifumaneka kwizahluko 6-11 kunye no-12-14 zihambelana ngokucacileyo nezilumkiso zikaYesu ezivela kwiVangeli:
IsiCwangciso sokuqala: Abaprofeti bamanga
Isisindululo sesibini: iMfazwe
IsiSwina sesithathu: indlala
IsiCwangciso sesine: Isibetho
IsiCwangciso sesibini: Usizi (intshutshiso)
Isitywina sesithandathu: iimpawu zasezulwini
ISityhilelo ithi emva kokuvulwa kwesiSwina sesisibhozo, isigwebo siya kuza emhlabeni ngokuqulunqwa kweentlekele eziphetha ngokubuya kukaKristu, isigwebo sokugqibela, nokusekwa ngonaphakade kwizulu elitsha nomhlaba omtsha.
Ukuhluthwa Vs. Ukuza kwe sibini
AmaKristu ahlukeneyo malunga nendlela ukubuya kukaYesu kuya kubonakala ngayo. Abavangeli abaninzi bayakholelwa ukuba uKristu uza kuza kuqala emoyeni ekuhlwithweni , xa eqokelela amalungu ebandla lakhe kuye.
Bachaza ukuza kweSibini , emva kwezehlakalo zeSityhilelo zenzeka emhlabeni, ziya kuza emva koko.
AmaKatolika amaRoma , amaOthodoki aseMpuma , iiAnglican / ii-Episcopalians , amaLuthere kunye namanye amahlelo angamaProtestanti akakholelwa ekuhlwithweni, kodwa kuphela ukuza kweSibini.
Ngayiphi na indlela, onke amaKristu akakholelwa ukuba uYesu Kristu uya kubuya emhlabeni ngenxa yokuba wathembisa ngezihlandlo eziliqela ukuba uya. Izigidi zamaKristu zicinga ukuba isizukulwana esizayo siya kuphila ukuze sibone loo mini.
Umbuzo obaluleke kakhulu: nini?
Ukufunda kweTestamente Entsha yokuvuka emva kokuvuka kutyhila into emangalisa. Umpostile uPawulos kunye nabanye abalobi beencwadi babecinga ukuba bahlala kwi-End Times iminyaka engama-2 000 edlulileyo.
Kodwa ngokungafani nabalungiseleli banamhlanje, bebazi ngcono kunokuba babeke umhla. UYesu ngokwakhe wathi:
"Kodwa ngaloo mini okanye ngeyure akekho owaziyo, kungekhona neengelosi ezulwini, okanye uNyana, kodwa nguYise kuphela." (Mateyu 24:36, NIV)
Sekunjalo, uYesu wayala abalandeli bakhe ukuba bahlale beqaphele onke amaxesha kuba wayebuya nanini na. Oku kubonakala kuphikisana nembono yokuba imimiselo eninzi kufuneka idibene phambi kokuba ibuye. Okanye ingaba oko kuthetha ukuba le miqathango sele idibene nayo, ngaphezu kweeminyaka eziwaka ezidlulileyo?
Kungakhathaliseki, iimfundiso ezininzi zikaKristu kumzekeliso zinika umyalelo wokulungiselela amaxesha okugqibela. Umzekeliso weentombi ezilishumi zicebisa abalandeli bakaYesu ukuba bahlale beqaphele kwaye balungele ukubuya kwakhe. Umzekeliso weTalente unika isikhokelo esisebenzayo malunga nendlela yokuhlala ilungele loo mini.
Njengoko izinto zihla kakhulu ngakumbi emhlabeni, abaninzi banomuva wokubuya kukaYesu ixesha elide. Amanye amaKristu akholelwa ukuba uThixo , ngenceba yakhe, ukulibaziseka kangangoko kunokwenzeka ukuze abantu abaninzi basindiswe . UPetros noPawulos basilumkisa ukuba sibe nge shishini likaThixo xa uYesu ebuya.
Kuba amakholwa akhathazeke ngolo suku, uYesu watshela abafundi bakhe ngaphambi kokunyuka kwakhe ezulwini:
"Akunjalo kuwe ukwazi amaxesha okanye imihla uBawo ebekwe ngayo igunya lakhe." (IZenzo 1: 7, NIV)
I-Unger's Bible Handbook , uMerrill F. Unger.
Iziqalekiso kunye nokuqalekisa: Yintoni iCoverse?
Yintoni Inkcazo Yabangendawo EBhayibhileni?
I-Ad Misericordiam Ingxabano
I-San Jose State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Yintoni Umthetho Omoya Ococekileyo?
Imfazwe Yesizwe YesiNgesi: Ingqwalaselo
I-Biography: uGeorge Washington Carver
Amagama aqhelekileyo adibanayo: Alula kwaye alula
I-Gasoline kunye ne-Octane Ratings
Imbali yeQela leMoto eliPhezulu leSithuthi (SVT)
Umzekelo Wokungathembeki I-Interval for the Variance Population